वसन्त Basanta 巴萨塔 バサンタ : स्पन्दन कविता पुरस्कार
आज भानुजयन्ती, यसैले सर्वप्रथम आदिकवि भानुभक्तमा हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु।
सात महिना पहिले मैले मेरो एक कविता 'परदेशी' ले स्पन्दन कविता पुरस्कार - २०१० प्राप्त गरेको कुरा यहाँहरुसमक्ष राखेको थिएँ। त्यसबारेमा यहाँ क्लिक गरेर पढ्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ मैले 'स्पन्दन' साहित्यिक पत्रिका र यसका प्रकाशक अग्रज साहित्यकार आदरणीय होम बहादुर क्षेत्रीज्यूका बारेमा पनि केहि लेखेको छु।
स्पन्दनले अरु बिभिन्न बिधामा पनि पुरस्कारहरु घोषणा गरेको थियो र पूर्व योजनाअनुसार पुरस्कार वितरण समारोह आजकै दिन आसाममा हुने कार्यक्रम थियो। यहि निहुँमा म आसाम घुम्ने योजना र कल्पनामा पुगीसकेको थिएँ। तर केहि समय पहिला क्षेत्री सरको सन्देश प्राप्त भयो, विशेष कारणवश कार्यक्रम आयोजना गर्न सकिएनछ। उहाँले प्रमाणपत्र पठाउन ठेगाना माग्नुभएको थियो। केहि समयपछिनै आईपुग्यो प्रमाणपत्र, र पुरस्कार राशि पनि मनी ट्रान्सफरका माध्यमबाट हात प-यो।
उक्त सम्मानका लागि फेरि एकपटक 'स्पन्दन' परिवार र आदरणीय क्षेत्री सरलाई हार्दिक धन्यबाद दिन चाहन्छु र नेपाली भाषा-साहित्यको सेवामा लागीरहने दृढता व्यक्त गर्दछु।
Posted by Basanta at 4:28 PM
दीपक जडित July 13, 2011 at 6:23 PM
फेरी एकपटक बधाई तपाईंलाई वसन्तजी । व्यक्त दृढतामा तपाईंको कलम अटुट चलोस् । शुभकामना!
inashrestha July 15, 2011 at 4:25 PM
congrats basanta ji!
Bed Nath Pulami July 15, 2011 at 5:03 PM
दिपक दाइ ले भन्नु भए झैँ फेरी एक पटक बधाई छ यहाँ लाइ - बसन्त दाइ !
Dilip Acharya July 15, 2011 at 6:26 PM
एकदमै खुशी लागेको छ ! हार्दिक बधाई । अब भोज कहिले खुवाउने त ?(प्रमाणपत्र सँगै दाम पनि जो आएको छ :)
Basanta July 17, 2011 at 5:14 PM
हार्दिक धन्यबाद यहाँहरु सबैलाई!
दिलिप दाइ, अबको पटक काठमाण्डौं आऊँदा भोज पक्का भयो ल:)